Tag: traikefa | Martech Zone
Niova tanteraka ny dia nataon'ny mpanjifa antsinjarany
Alarobia 6 Janoary 2016 Alakamisy Janoary 7, 2016 Douglas Karr
Indraindray aho manontany tena raha nanoratra lahatsoratra zato hafa momba ny fanovana fihetsika mividy, miaraka amina loharanom-baovao fanampiny an-jatony, raha hanomboka hihaino ireo vinavina. Toa tsy mihaino fotsiny anefa izy ireo. Rehefa maheno isika dia tsy mitovy ary avy eo manao fikarohana dia mahita zavatra mitovy foana. Miova ny fomba fividianana ny mpanjifa. Niadana ny fiovana tamin'ny voalohany, fa izao dia mihazakazaka. Dimy ambin'ny folo taona lasa izay, amin'ny mpitsidika 10 - 1 na 2
Fironana 14 amin'ny fikorontanana miaraka amin'ireo masoivoho
Alarobia, Martsa 4, 2015 Douglas Karr
Hatramin'ny niasanay ny maso ivoho manokana manampy ireo orinasan-teknolojia marketing, fantatray tsara ny fizahan-toetra sy ny fisedrana eo amin'ny sehatry ny masoivoho. Amin'ny maha masoivohon'ny butikety antsika dia manana tombony isika satria afaka mifantina amin'ny mpanjifanay tokoa. Etsy andaniny, matetika isika no mitolona satria ny orinasa orinasa dia tsy te-handanjalanja masoivoho hafa amin'ny fifangaroan'ny varotra. Nahafinaritra anay ny nandroba an'ireo mpanjifa sarotra taminay. Fa amin'ny rehetra
Tondrozotra mankany amin'ny hoavin'ny marketing
Alahady, Jolay 13, 2014 Alatsinainy Martsa 16, 2015 Douglas Karr
Nahavoa tsara. Izany no noeritreretiko raha vantany vao hitako ny sary etsy ambany avy amin'ny tatitry ny MediaPlant tohanan'ny Microsoft, Dollars, Bits, and Atoms: Roadmap to the Future of Marketing. Jery ​​todika tsara sy azo ampiharina amin'ny fomba fivoaran'ny teknolojia ahafahan'ny tetikady marketing mahomby kokoa. Nisongadina ny kisary iray satria nanampy an'ireo orinasa hamolavola ny paikadim-barotra amin'ny Internet izahay ka nampidiriko eto ambany. Ny marketing dia ao anaty tetezamita,
Ny kanto sy ny siansa amin'ny marketing amin'ny atiny
Alatsinainy, 23 Jona, 2014 Alahady, Jona 22, 2014 Douglas Karr
Na dia ny ankamaroan'ny zavatra soratantsika ho an'ny orinasa aza dia heverina ho mpitarika, mamaly ny fanontaniana napetraka matetika, ary ny tantaran'ny mpanjifa - karazana votoaty iray miavaka. Na lahatsoratra bilaogy, infographic, whitepaper na horonan-tsary mihitsy aza, ny atiny misy fampisehoana tsara indrindra dia mitantara tantara izay nohazavaina na naseho tsara, ary tohanan'ny fikarohana. Ity infographic avy any Kapost ity dia tena mampiaraka izay mahomby indrindra ary ohatra tsara amin'ny… fitambarana zavakanto